IFirefox 7 iyatholakala: Yifake ku-LMDE | Kusuka kuLinux
IFirefox 7 iyatholakala: Yifake ku-LMDE
I-Firefox 7 Sezivele zitholakale futhi ubusha obuyinhloko lezi zinguqulo ezisilethelayo ukusebenza kangcono ekusetshenzisweni kwememori.
Isimemezelo asikenziwa ngokusemthethweni okwamanje, kodwa kusukela lapho IMozilla FTP manje usungalanda ngezinhlobo zazo ze- I-GNU / Linux, Windows y Mac. Noma Linux ukusebenza kuthuthukile, angicabangi ukuthi kungukuqhudelana, kusesekude phambili Firefox ukunqoba empini yeziphequluli futhi leyo ngenye yezinkinga ezinkulu.
Ngenguqulo entsha kungenzeka ukuthi izandiso eziningi ziyeke ukusebenza, kepha uma sifuna ukuyifaka ku- I-LMDE, kufanele sivule ukuphela bese senza okulandelayo:
Lapho ifayili selilandiwe (ku- / ekhayasiyivula iziphu bese izokwakha ifolda ebizwa ngokuthi Firefox. Sibuyela kukhonsoli ukugcina inguqulo yangaphambilini bese siyifaka esikhundleni sayo:
Siqala kabusha noma siqala Firefox futhi sesivele siyisebenzisa ku- I-LMDE.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IFirefox 7 iyatholakala: Yifake ku-LMDE
Kuzodingeka ukuvuselelwa ukufakazela lokho
Ingabe kukhona umehluko ekusetshenzisweni?
Ngokwethembeka, kukhona umehluko, kepha njengoba ngishilo, hhayi ukuxoxa ngakho.
Into ethokozisayo ngale nguqulo entsha yesiphequluli esithandwayo seMozilla ukuthi ishesha kakhulu kunenguqulo yangaphambilini (iFirefox 6.0).
Ngaphezu kwalokho, kuzinguqulo ze-Beta, eminye imininingwane yalungiswa okusho ukuthi manje sesingasijabulela isiphequluli okuthi, yize sifana ne-Chrome, silethe ukuphepha nokusebenza okufunwa yilowo nalowo msebenzisi lapho epheqa kunoma yiliphi ikhasi lewebhu .
Ukufana kuyiqiniso. Ngihlale ngibona ukuthi iziphequluli zithatha kanjani izinto kwabanye. Ngicabanga ukuthi kuzofika lapho wonke umuntu efana khona is
Uhm angikuboni ukufana ne-Chrome / Chromium, noma ngingaboni noma njengoba ngingakafaki i-Chromium bayibeke njengeFirefox.
Asibone. Le yimininingwane kepha i-Chrome / Chromium iyisebenzise kuqala:
- Ukuqokomisa kwesizinda.
- Ukukhishwa ku-http.
- Imenyu Enobunye.
Ngingahle ngibe nenye ...
Hawu, lezo zinto ebengingaziboni nokuthi ziyiziphukuphuku, (hhayi ukukutshela isilima noma ukuphawula kwakho) ake sikhulume nge-minutiae futhi noma ngabe ibukeka iyisilima nayo, ngiyayithanda ku-Paste & Go, engicabanga ukuthi isukela ku-v 6.
Ngaphambi kokuthi ngishaye ngishaye yonke into.
Jo by the way umehluko onjani, ukuba ne-firefox 7 ku-Archlinux
ukube ubunenguqulo yangaphambilini
uma ungenayo, khona-ke nge «sudo pacman -S firefox»
Ezintweni abazenza zibe yi-distro engiyithandayo.
Kungani izeluleko eziningi ezinikezwe lapha zingasizi?
Futhi ngiyazibuza ukuthi kungani, kwesinye isikhathi, labo abazi kabanzi ngeLinux bachaza izinyathelo zokwenza okuthile kepha abanye bazisho nje ngoba bacabanga ukuthi zilula kakhulu ... bese kuthi thina esingazi kangako siduke futhi akukho okusisebenzelayo.
Elav, ngiyaxolisa kodwa okushoyo lapha akuzange kungisize. Angikwazi ukubeka ifolda ekhishwe "firefox" ku / ekhaya.
Sawubona futhi. Ngiziphendulela.
Angikwazanga ukukopisha lutho enkombeni / yasekhaya, angazi ukuthi ngikwenze kanjani. Noma kunini lapho okuthile kudinga ukukopishelwa enkombeni evikelwe, angazi ukuthi ngingalwenza kanjani ushintsho lwami njengempande esebenzayo.
NOKHO, ngenkathi ngithuthukisela kuFirefox 7, kufanele ngisho ukuthi ekugcineni, yenzekile.
Sengiphetha, ngiyabonga kakhulu u-Elav ngendatshana yakho. Ngibe nzima kepha kwaba njalo. Ngokwami, ngikumema ukuthi uzame ukungashiyi incazelo yezinyathelo ezithile, noma ngabe kulula kangakanani ukuzithola; Lezi zinyathelo zingaba nzima kulabo bethu abangenalo ulwazi oluningi.
Uqinisile ukuthi kwesinye isikhathi siphuthelwa izinto. Lokhu kwenzeka ngoba asiqapheli ukuthi abasebenzisi abasha abazenzi kahle izinto ezithile eziyisisekelo ku-GNU / Linux. Kepha ngichaza ukuthi sengivele ngidlulisela wena, nawo wonke umuntu ofunda le ndatshana. Engikweqe kwaba okulandelayo:
Ku-console lapho sikunoma yimuphi umkhombandlela futhi senza umyalo:
Lokhu ngokuzenzakalela kusisa kithi / ekhaya, noma ku- / ekhaya yomsebenzisi esenza umyalo ngaye. Ngakho-ke, ku-athikili ngafaka lo myalo:
Wenzani? Okokuqala sebenzisa umyalo cd nomsebenzisi wethu futhi uma esegcwalise i-oda, simtshela nge && sebenzisa ukulanda nge wget. Ukulanda lokho kuzosindiswa kufayela lethu le- / ekhaya.
Ngizokwenza i-athikili ngale miyalo eyisisekelo .. 😀
asiqapheli ukuthi abasebenzisi abasha abazenzi kahle izinto ezithile eziyisisekelo ku-GNU / Linux
Hhayi-ke, mabafunde esikhundleni sokubeka imibono engathandeki
Sawubona, Isibindi. Ngihlekela insini ngempendulo yakho. Kepha-ke, ungabi nesibindi kangako.
Ukuphawula kwami ​​bekungenabungani kodwa kimi. Ngingathanda ukwazi nokufunda okuningi, kepha njengamanje, amaphrojekthi ami antshontsha ukunakwa. Bengifuna nje ukuzwakalisa ukukhungatheka kwami ​​lapho izinto zingangihambeli kahle, kepha ngiyahlala ngiluthokozela usizo lwabantu abanjengo-Elav nawe okhona ukwabelana.
Futhi ngizoqhubeka nokuza kulokhu nakwamanye amabhulogi: qhubeka ufunde!
Ungamnaki kakhulu uQiniso, kunezinsuku lapho evuka khona ecabanga ngoBuntu futhi kahle, lokho kushaya ikhanda hahaha
Cacisa lokho lapho ubeka isibonelo: $ cd, lokhu akusho ukuthi kufanele ubeke $ empeleni, kufanele ubeke cd
UMiguel Icaza uthopha iWindows 8 futhi ucabanga ukuyisebenzisa, ugxeka uBuntu futhi uqinisekisa ukuthi: "I-Linux inezicelo ezimbalwa kakhulu ezinhle"
Mikogo: noma ungayenza kanjani imihlangano ebonakalayo ku-Linux